Ọrụ na Sharjah ka anyị duzie gị maka ọrụ na ịdị ndụ
Ọrụ na Sharjah
Ọrụ ụgbọ elu Dubai maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa
Abu Dhabi ka Dubai
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at April 17, 2018
Ọrụ na Sharjah dịkwa na anyị ụlọ ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ. N'oge ugbu a ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ma enwere ndị ọzọ ụzọ ịchọta ọrụ na UAE. Ka anyị chee ihe karịrị 80% nke ndị ọgbọ ga-eti maka obodo ndị a ma ama dịka Dubai na Abu Dhabi.
The Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyere aka ịchọta ọrụ na Sharjah. Anyị na-enye ihe ịtụnanya nyocha oru ọrụ. https://www.dubaicitycompany.com/my-time-at-dubai/Es musamman maka ndị na-achọ ọrụ na-achọ inweta ọrụ na Sharjah. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ile anya na ntụziaka anyị. Ndị otu anyị ga- enyere gị aka nyocha ọrụ gị. Dubai City Ndị otu ụlọ ọrụ ga - eme ka gị na ndị na - ewute gị bata UAE. Citylọ ọrụ Dubai City bu n’obi nye gi ndu aka. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Sharjah.
I choro mụta ọtụtụ ihe banyere Emirate nke Sharjah. Yabụ biko gaa n’ihu gụọ ma lelee ụdị ọrụ Shariah ị nwere ike ịchọta. N’aka nke ozo gini bu ndu ọnọdụ maka ndị ọgbọ na 3rd nke a obodo na United Arab Emirates.
Ozi banyere Sharjah City
Sharjah City dị ezigbo mma ebe maka ndị ọgbọ. N'aka nke ozo, o buru nke ato na nke ato obodo kachasị biri na United Arab Emirates. Yabụ na ọ nwere ike ịbụ a ezi echiche iji nweta ọrụ n'ebe ahụ. Ka anyị chee ya ihu ndị na-achọ ọrụ site na India na Pakistan. Are na-achọ ọrụ na United Arab Emirates. Dika odi, odi otutu ohere maka oru na Sharjah. Obodo a bụ otu akụkụ nke mpaghara obodo Dubai-Sharjah-Ajman.
Obodo Sharjah ọ bụ nke dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri nke Ọwara Oké Osimiri Pasia n’Alabia. Enwere ọtụtụ ndị ọpụpụ n'obodo a. N'iburu nke a n'uche, ọrụ na Sharjah bara uru ilele. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na mpaghara Shariah. Ikwesiri inwe ụfọdụ ozi iji chọpụta otu esi amalite nke ọma. Kama nke ahụ, Sharjah bụ isi obodo nke Sharjah.
Obodo Sharjah nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ala nke UAE. Obodo nwere iwu gọọmenti etiti nwere, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ obodo ọ bụla nwere ikike nke aka ya. Iji maa atụ, ụfọdụ ọrụ dịka obodo mmanye iwu so na mpaghara nke aka ya. Ọchịchị Al Qasimi na-achị Emirate Sharjah kemgbe narị afọ nke 18. Obodo Shariah bụụrụ ebe maka Omenala Arabic na ụlọ ọrụ. Sharjah na-enye aka karịa 7.6% nke GDP nke United Arab Emirates.
Ebe na-arụ ọrụ dịka onye Alakụba
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ebe ị ga-ebi na ezinụlọ gị. Obodo Sharjah ọ dị oke mma maka gị. Gburugburu ebe a na-ekpuchi ebe dị mma nke 235 km². Ma ọ bụ ezigbo ebe obibi na UAE maka ndị ụkọchukwu Pakistani. Obodo nwere onu ogugu karịrị 1.400,000 (2018). Ọ toro eto n’oge kemgbe 2008 na mmalite nke 2009.
Dị ka ọnụ ọgụgụ nke Ngalaba Nyocha na Development Community. Obodo dị nnọọ ọ dị mma maka ndị ọrụ ụwa. Ihe mejupụtara onu ogugu enwere ugbua kariri 205,000 Emiratis, ebe enwere ihe kariri nde ndi mbu ohuru 1.2 bi na Sharjah. Na eziokwu, ndị mmadụ na-anụ ụtọ ebe a dị ịtụnanya maka na odi ihe ole na ole.
Dịka ọmụmaatụ, ire ma ọ bụ oriri nke Amachibidoro ihe ọ drinksụholicụ mmanya na-aba n'anya ókè n'okirikiri nke Sharjah. Shopslọ ahịa ndị ahụ kwesịrị ịnweta ikikere mmanya ma ghara ị alcoholụ mmanya na nkwari akụ Sharjah. Ọzọkwa, ụlọ oriri na ọ shopsụ andụ na ụlọ ahịa ndị Alakụba na-arụ ọrụ azụmahịa ndi mmadu. Na mpaghara ahụ, enwere otutu ebe ebe ichota oru.
Nke a bụ ihe mere Sharjah abawanye ọnụọgụ nke ndị njem njem Alakụba na 2010 ruo 2019. Ọtụtụ n'ime ndị si Saudi Arabia na Pakistan na-eleta Emirate nke Sharjah. N'aka nke ọzọ, a na-akpọ Sharjah aha dị ka obodo kachasị mma na UAE.
Ọrụ Sharjah bụ otu n'ime ihe kacha mma maka ụmụ akwụkwọ. N'ihi na obodo ahụ họọrọ Sharjah dị ka obodo 68th kasị mma maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ. Na otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa maka ụmụ akwụkwọ mahadum. Sharjah inye ọ bụghị naanị ọrụ ohere. Obodo a maara nke ọma dịka isi obodo ọdịbendị nke UAE. Ọzọkwa, ebe a dị ịtụnanya natara ọdịnala ndị Alakụba onyinye onyinye isi ego na 2014.
Ọnụ nke ibi na Sharjah
Ozi zuru oke maka ndị na-achọ ọrụ na Sharjah
Ọ dị mma, ugbu a ị nwere ụfọdụ ihe ọmụma dị mkpa. Ugbu a, anyị chọrọ ịmalite ịme atụmatụ ịrụ ọrụ na ibi ndụ na Emirate nke Sharjah. N'otu oge ahụ, enwere ajụjụ dị mkpa ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Ọzọkwa, ị ga-achọta azịza nye ajụjụ gị. Ọ bụ ihe ọmụma dị mkpa ịchọrọ ịma tupu oge a ị na-aga ịchọ ọrụ na Sharjah. N'aka nke ọzọ, Sharjah dị iche na ụfọdụ Emirates. Ọmụmaatụ, na United Arab Emirates, enweghi ụgwọ ọrụ kacha nta maka ndị ọrụ. You nwere ike ịtụ anya ka ọnụego ma ọ bụ ụgwọ ụgwọ na Sharjah.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ụgwọ ọrụ, Sharjah bụ Ebe ịtụnanya dị ndụ. N’aka nke ọzọ, ị ga-enweta ezigbo ụgwọ ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ụgwọ ọrụ gị na-adabere n'ụzọ dị mma ị ga-esi soro ndị were gị n'ọrụ ga-emekọrịta ihe. Ihe kacha mma ị ga - atụ anya ya bụ nke a tụkwasịrị obi n'aka onye were gị n'ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ajụjụ dị nkenke nke onye were gị n'ọrụ na-ajụ ndị chọrọ ya. Ọ bụ ego ole ị tụrụ anya ya.
Azịza kasị mma maka onye ọrụ gị n'ọdịnihu na nyochaa bụ inye ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ. Ekwuputara ya na AED ma buru n'uche. Ihe ngwugwu ụgwọ ọnwa dị ala ị dị njikere inweta ọrụ ọ bụla ị na-achọ. Ngwa ngwa, a ga-ewe gị n'ọrụ na Sharjah.
Ọrụ na Sharjah maka ndị ọpụpụ
Sharjah bụ otu n'ime atụmatụ akụ na ụba kasị mma na UAE. Ndị bi na Sharjah nwere ike ịgụnye Nchikota ezi ndu na oru. Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka ndị na-achụ nta na Sharjah. Dịka ọmụmaatụ àgwà ndụ ị ga-enwe na Sharjah. Ọ dị mma maka ezinụlọ na n'ozuzu ndụ ọsọ ọsọ. Ya mere, ka anyị chee ya ihu bụ isi ọrụ ohere na Sharjah. Mgbe ịchọta ọrụ na Sharjah ego ị ga-eri ga-adị ala karịa Dubai na Abu Dhabi.
Ndụ kacha mma nke ị ga-ahụ n'ezie na Sharjah. Definitely mara choo ike na ndu ohuru gi. Ebe ike dị ndụ ga - abawanye, ọ ga - emetụta ihe ị na - enweta n'ọdịnihu.
Na UAE ọ dị mkpa imata ihe ichere nihe eji ebi ndu. Tupu ị gawa maka Ajụjụ ọnụ. Ikwesiri inye onu ogugu maka mkparita uka banyere ugwo oru.
Ebumnuche Maka Ọrụ na Sharjah na Ọnụ Ndụ
Na Emirate nke Sharjah, enwere ego dị ala karị. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị jiri ndị ọzọ Emirates tụnyere. Ka anyi mee ya ma gbasaa ihe omuma banyere ibi na Sharjah n'ime ihe ole na ole. Ụlọ ọrụ Dubai City na-enyocha nke ọ bụla na ọnọdụ ibi na Sharjah. Enwere nhọrọ Nhọrọ siri ike ebe ị ga-amalite ibi na United Arab Emirates. Ka emechara ọtụtụ njem ahụ bịara biri na United Arab Emirates (UAE). Luckily, ma ọ bụ unluckily maka ndị ọrụ ọhụrụ. Ha na-enwe nhọrọ mgbe niile ma ha kwesiri ime ya nke oma. Imirikiti ọrụ anaghị abịa na ebe obibi, n'akụkụ gị adịghị mma, ụgbọ njem dị n'isi gị. Ọzọkwa, mgbe ị nwara ịgbada ọnụahịa ụlọ. N'ihi na ọtụtụ mgbe ha dị oke ọnụ. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ga-agwa gị na ọ gaghị ekwe omume.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ahịa agbanweela kemgbe 2008 mgbe UAE ebe ọ bụ na ọ bụ ọganihu. Ọbụna ọnụahịa nke mbadamba, nri na ihe ndị dị mkpa dị ka mgbatị. Ịkwesịrị ịhọrọ otú ị ga-esi ebi na ebe ọ bụla ị ga-abụ ụzọ ịchọrọ. N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe ndị dị na Sharjah. N'ihi na a otutu ndi ozo n'adighi ala kama ibi na Dubai ma obu Abu Dhabi. Ha ahọrọla ibi na Sharjah. Ọtụtụ ndị ọbịa ahụ emeela nyocha tupu ịkwaga UAE. Na mkpokọta akụkọ na-egosi na ọhụụ zuru oke ọ dị ọnụ ala karịa ibi na Sharjah karịa Abu Dhabi na ụdị dị iche iche.
Ebe obibi dị na Sharjah
Otu n'ime ihe kachasị ọnụ ma ikekwe na-akwụ ụgwọ otu oge maka ndị ọgbọ ọhụrụ. ebe ọ bụ na ị kwaga United Arab Emirates ọ ga-adị gị mkpa ichebara echiche nke ọma. Na-ekwukarị gbasara ịgbazite ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ ụlọ obibi. Ala na ụlọ bụ ụlọ ọrụ na-eto eto na Abu Dhabi, Dubai, Sharjah na ndị ọzọ Emirates.
Ma n'ezie, a na-eji ọnụ tụnyere New York na London. Sharjah na United Arab Emirates na-asọmpụ ndị ọzọ Emirates na usoro nke ahia azụmahịa. Nzube a bu ugwo nke ulo ndi ozo maka ndi ozo. Idebe ego nke ndụ abawanyewo na afọ ndị na-adịbeghị anya. Otu ihe kpatara ya bụ na ndị ọpụpụ ọhụrụ emetụtawo azụmahịa na UAE. Na ọrụ maka ndị ọrụ ala ọzọ na Sharjah ebula. N'ihi nke a, ọchịchọ nke ebe obibi dị ndụ emeela ka ụlọ ọrụ na-eto eto na-eto eto. Na azụmahịa site na ịgbazinye ọnụ ụlọ, villas na ebe obibi. Maka otu ihe, aghọwo uru na obere na ogologo oge.
Ọnọdụ ọrụ, ụlọ na mgbazinye na Sharjah, UAE
E nwere ebe dị iche iche ị nwere ike ịchọta ụlọ na ebe obibi na Sharjah. Ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ụlọ maka ịgbazite n'okpuru. Ma aghaghị icheta, bi na UAE bụ ụgwọ dị oke ọnụ. Dịka ọmụmaatụ ka ịmalite ịkwesịrị ị nweta ego. Iji nweta ọnụala ị chọrọ ịkwụ ụgwọ. N'aka nke ọzọ, ka ị na-amalite ịme ego, ị nwere ike imeli ezigbo ego. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnweta ụlọ mara mma ma ọ bụ ezigbo ụlọ. Karịsịa mgbe ị na-amalite na-eme ego ka ị na-arụ ọrụ na azụmahịa ma ọ bụ injinia. Ma ọ bụ ebe ọ bụ na a ga-akwalite gị ị nwere ike ịnweta ọnọdụ okenye ma nyekwuo ego.
Ụgbọ njem maka ọrụ Sharjah ka Dubai
The Roadzọ Dubai ndị na-ahụ maka mbugharị na-arụ ọrụ nke ukwuu. Thegbọala na elekere awa nwere ike ịga n'ihu Na-ekwukarị, ọnụọgụ ndị njem na-esi Sharjah aga Dubai. Ọtụtụ n'ime ọpụpụ na-eji bọs. Ọzọkwa, ha na-ejere ndị njem njem kwa ụbọchị ma ọ bụ ọtụtụ n'ime ha. Olu olu a na Sharjah di nma. Ọ bụghị ọtụtụ nsogbu ịgagharị na ime ịzụ ahịa. N'akụkụ aka nke ọzọ, obodo Dubai, ọkachasị n'okporo ụzọ Sheikh Zayed na-ejupụta n'oge elekere kachasị.
Dịka ọ bụla n'obodo ọ bụla buru ibu, okporo ụzọ ụgbọ oloko na Dubai na-adịkarị arọ. Bọchị ọ bụla na - eme ka ọ sie ike ma sie ike maka ndị ọrụ mpaghara ịbanye ụgbọ ala. N’aka nke ozo, tagzi bu ihe ozo di nma karie njem njem site na mbufe. Gbọ njem bụ nnukwu okwu na Dubai. Emegoro ka goomenti di na UAE, na ha kwesiri ime ihe banyere ya. N'ihi ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmahịa na ụlọ ọrụ Dubai. Karịsịa ọrụ ego na nnukwu ego na-enweghi ebe di nso ebe obibi. Nke ahụ na-eme nnukwu ihe dị iche maka ndị njem.
Ya mere ,, Ị dị njikere maka inweta ọrụ na Sharjah ?.
Ịkwaga ọrụ na Sharjah
Ọ dị mma. yabụ ugbu a, ka anyị kwuo maka ịkwaga mgbe ị na-arụ ọrụ na Sharjah. Otu n'ime ihe atụ, ọ bụrụ na ị bi na Sharjah. Ma n'eziokwu, ị bụ na-arụ ọrụ na Dubai dị ka onye India. Naanị ị ga - esi na Sharjah gaa Dubai. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịme ya otu a, nke ahụ agaghị abụ nnukwu nsogbu. Yabụ, ibi na Sharjah ma na-arụ ọrụ na Dubai. Imirikiti ndị si mba ọzọ na-eme nke a iji chekwaa ego n'ụlọ. Ijikwa oge gị ịga njem ghọrọ nnukwu ego na nke a. Wille will ga - eji opekata mpe elekere abụọ ma ọ bụ elekere abụọ na ọkara na elekere. Site na Sharjah rue Dubai na nloghachi. N’ikpeazụ, ị ga-enweta nkụda mmụọ. N’oge na-adịghị anya, nke a ga-ewetara ndụ gị obi ụtọ. E kwesiri itinyekwu nkwekọrịta na ọdịnihu gị.
N'ezie, e nwekwara ụfọdụ ihe ndị dị na nke a. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-eme njem maka oge 30 ma ị ga-anọ n'ụlọ. Ị ga-azoputa ego dị ukwuu mgbe arụ ọrụ na Dubai.
Ihe oriri na Sharjah
Nri kwesịrị ịbụ nke kacha nta na-echegbu gị. Ihe niile, n'eziokwu, dabere na onu oriri na ahịa na United Arab Emirates. Ọzọkwa, ọnụahịa na-abịa site na steeti akụ na ụba ụwa. Na mbak nke ụlọ ọrụ ọ bụla na ahịa ngwaahịa. N'ụzọ dị ịtụnanya, nri ahụ adịbeghị ọnụ maka ndị ọbịa bịara ọrụ ọhụrụ abata Sharjah. Ị nwere ike ịlanarị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọkwa niile. Ezigbo nri bụ iri nri, nke a bụ akụkọ ọzọ. Ụkpụrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ewepụ, ị nwere ike ijikwa. N'ebe na-adịghị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ iwere ezinụlọ gị ma ọ bụkwanụ maka nri abalị. N'ezie, ị ga-eche ya n'eziokwu. Ma ọ bụghị ọdachi, ọ bụ ọnụ maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ.
N'ikwu okwu na nri na UAE, Sharjah abụghị ọnụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ nwere ahụmahụ zuru oke nwere ike ịchọta ezigbo nri na ezigbo ego. Ọbụna ndị mmadụ nwere ụfọdụ ọrụ nchịkwa dịka ọmụmaatụ ọrụ nlekota ga-abụ Ok. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-arụ ọrụ na ebe ndị na-ewu ihe na Ahịa Ọrụ na Al Quoz na Dubai City. O doro anya na ị ga-enwe ike ịnweta oge nri iji nweta ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ọrụ gị na Sharjah dị ka onye ọpụpụ
Ugbu a, anyị kwesịrị ile anya na ị ga-akwụ ụgwọ na ibi na Shariah. Ma zaa ajụjụ ole na ole na ọ dị mkpa ka ọ rụọ ọrụ na Sharjah ?.
Ya mere, olee nhọrọ gị maka ibi na ịrụ ọrụ na Sharjah? Ma yikarịrị ka ị chọrọ ibi na Sharjah ?. Ajụjụ a bụ ego ole ka ị ga - eji mee ka ndụ gị dị mma.
Nke ahụ bụ ọtụtụ ajụjụ ịchọrọ ịza onwe gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem na-ele anya ịnọgide na UAE. Thegwọ ọnwa Sharjah nwere ike ịbụ ihe na-erughị Dubai na Abu Dhabi. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike ọ gaghị adị oke iche na Dubai. Nwere ike ịchọta ụgwọ ọrụ dị mma n'etiti ọtụtụ ọrụ. Ha niile dabere n'ihe ị nwere iru eru. Ọzọkwa, ọ dị oke mkpa ka ị dị na-ere onwe gị nye onye ga-ewe gị ọrụ na UAE. Eleghị anya ịchọrọ inwe ezigbo mkparịta ụka.
Ọ bụghị ihe ọhụrụ na United Arab Emirates. Ọ bụrụ n’ị ga-ahụ onye odeakwụkwọ nchịkwa dị egwu. Isnye na-eme ọtụtụ ihe karịa ka onye nlekọta n'otu ọgbakọ ?. Iji maa atụ na UAE, inwere ike ịhụ ọtụtụ ọdịiche. Offọdụ ndị na-arụ otu ọrụ ahụ nwere ike ịnwe ụgwọ ọrụ kwụrụ ụgwọ dị iche iche. Ọrụ dị na Sharjah n'oge ụfọdụ dị mma ịga. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ si Mumbai.
Atụmatụ maka Sharjah Job na-achụ nta
Isi ihe maka oru na Shariah bu imata ebe ichoro ibido na mgbe. Na Isi okwu ịchọrọ ikpuchi ya na ndị were gị n'ọrụ na Ajụjụ ọnụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ịkwesịrị ịjụ onye were gị n'ọrụ ma ụlọ ọrụ ahụ nyere ndị ọrụ ha ụlọ obibi n'efu. Offọdụ n'ime ha na-enye ụfọdụ ọnụ ụlọ naanị iji nyere gị aka ịmalite ọrụ gị na UAE. N'aka nke ozo, ọ bụrụhaala na chọta ọrụ na United Arab Emirates. Will ga-enwe ike iru ya, ịgaghị enwe oke nchegbu maka ya.
Enwere ụlọ ọrụ dị na United Arab Emirates nke na-enye ndị ọrụ ha ohere n'efu. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ na-achọ ịkwado ndị ọrụ ọhụrụ na ọkwa. Karịsịa fma ọ bụ ndị na-achụ nta ego si mba Eshia. N'akụkụ na-adịghị mma, ụfọdụ n'ime ndị na-achọ ọrụ ọhụụ. N’ezie, ọ ga-adaba na oke ego. N'ihi usoro ịchọrọ ọrụ ogologo oge. Ọrụ dị na Sharjah, n'ezie, abụghị nke siri ike inweta.
Kedu otu esi achọ ezigbo ụlọ ọrụ na Sharjah?
Ya mere burunụ n'uche na ọ dị gị mkpa ịchọta ezi ụlọ ọrụ mgbe niile. Na ga-edeba aha na UAE database. Ụfọdụ n'ime ndị na-achọ ọrụ ga-eso ụlọ ọrụ ahụ nke ahụ na-enye ebe obibi n'efu. Ma ọ ga-abụ ụgwọ dị ala. Youkwesiri icheta na ụlọ obibi na-abịa na ntinye nri mgbe niile ụgbọ njem.
Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-ewe ngwugwu ụgwọ ala. Ị ga-emekwu ego ka ọ bụrụ eziokwu. A ga-enye gị ụgwọ ọnụahịa nke ndụ. Ka anyị chee na enwere ebe obibi n'efu. Ịrụ ọrụ njem bụ nhọrọ ka mma maka gị. Ị dị ka onye ọpụpụ ịkwesịrị ka gị na onye ọrụ ahụ mee ndokwa ndị a dị mkpa.
Ọrụ oge na Sharjah
Chọta ọrụ nwa oge na Sharjah. Bụ ụzọ kachasị mma iji rụọ ọrụ na United Arab Emirates. Iji maa atụ, inwere ike ịrụ ọrụ oge niile na gọọmentị na Dubai. Mgbe ahụ ị nwere ike inwe ụbọchị 2 gbasaa ma rụọ ọrụ dị ka onye na-enyere aka ahịa ma ọ bụ nche nche. Site na iji ego ndị a ego, ị ga - enwe ike ikpuchi ụfọdụ ego akwụ ụgwọ. Iji maa atụ, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ pasent isii nke ịkwụ ụgwọ ụlọ nwere ike ịkwụ gị ụgwọ ọrụ oge nwa gị na Sharjah N’ezie, ọ ga-ewe nnukwu mbọ oge ị malitere ya. N'akụkụ aka nke ọzọ mgbe ị ga-abanye. Ahụ ga-adị gị mma nke ukwuu ma dozie mmefu ego gị.
Nchikota maka oru na Sharjah
Ya mere, ugbu a, ka anyị ruo n'ókè, ọ bara uru ka ọ malite ịrụ ọrụ?. Companylọ ọrụ Dubai City emeela ụfọdụ nnyocha. Azịza anyị dị mfe ọ bara uru ibi na Sharjah. Ulo a di nfe. Nwere ike nweta ọrụ nwa oge na Sharjah. Yabụ ịmalite ego gị, ị nwere ike ịkpọta ezinụlọ gị na United Arab Emirates. Ọnọdụ ibi ndụ gị nwere ike ịbịara gị ohere dị ukwuu. Ya mere ụlọ ọrụ Dubai City na-ekwupụta nke ahụ na-arụ ọrụ ma na-ebi na Sharjah ọ bụ ihe dị mma maka ndị ọgbọ.
Isi okwu ọzọ bụ Ọrụ dị na Sharjah na-egbusi ike. Ọ bụrụ na anyị ejiri Dubai na Abu Dhabi tụnyere Sharjah. Obodo a ka mma maka obibi obibi. Na mmefu ego gị nwere ike ịka mma. Yabụ, gbaa mbọ chọta ọrụ n'obodo a. N'akụkụ na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ịchọghị ya. Gbalịa nweta ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Wee banye n’uzo na ilaghachi. Na ụbọchị ezumike chọọ ọrụ nwa oge na Sharjah. Ọtụtụ ndị agha na-ekpuchi nnukwu ego site na inwe ọrụ ndị ọzọ na Sharjah.
N'ikpeazụ nke isiokwu anyị. Ụlọ ọrụ anyị na-akpọ gị ka ị gaa onye ọlụlụ anyị na-achọ ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dịka Ụlọ nke ndị India. N'ihi na ịdenye aha dị mfe pụrụ ịbụ ụzọ dị mma na ngwa ngwa maka ihe ọhụrụ UAE.
Ọrụ na Aetna International
Njem njem a